Paoma vita amin'ny paoma miaraka amin'ny crème pastry - Resipe Thermomix | ThermoRecipes
Mofomamy spaonjy Apple miaraka amin'ny crème pastry
tsindrin-tsakafo125 minitraOlona 10280 kaloria
Ity fomba fahandro mofomamy spaonjy paoma ity dia iray amin'ireo tsindrin-tsakafo tadiavinao amin'ireo daty ireo. Amin'ny vanim-potoana paoma dia afaka manararaotra manamboatra mofomamy matsiro miaraka amin'ity sakafo mahasalama ity isika.
Mandrosoa satria mora be izany. Miaraka amin'ny Thermomix anay dia hanao crème haingana izay ho fototr'ity mofomamy spaonjy mahavariana ity miaraka amina fromazy fanosotra.
Hametraka takelaka paoma izahay ary farany handrakotra ny zava-drehetra amin'ny crème mofomamy mamy miaraka amin'ny tsiro lavanila izay ho tianao. Azonao jerena ao amin'ny horonantsary nataonay ity fomba fahandro ity. Manantena aho fa tianao izany.
1 Mofomamy spaonjy Apple miaraka amin'ny crème pastry
Mofomamy spaonjy matsiro sy matsiro miaraka amin'ny fromazy fanosotra, miaraka amina paoma ary crème mofomamy mahafinaritra izay handrakotra ilay mofomamy. Ny fitambaran'ireo akora rehetra ireo dia hahatonga azy io ho tsindrin-tsakafo tonga lafatra.
Fotoana fiomanana: 1h 10M
Fotoana manontolo: 2h 5M
250 g ny karazana fromazy fanosotra ao Philadelphia
225 g ny lafarinina varimbazaha
Vovoka fanaovana mofo 1 sachet
Menaka oliva 40 ml
Paoma kely 2
Yolk atody 4
2 sotrokely esory lavanila
Siramamy vovoka 2 sotro fihosotra afafy
Manomboka amin'ny fanaovana ny crème pastry izahay. Ao anaty veranay dia ampiantsika ny ronono 500 ml, ny siramamy 135 g, ny 50 g ny katsaka, ny atody atody 4 ary ny sotrokely lavanila roa sotrokely. Izahay dia mamolavola azy hanamboatra fifangaroana, mandritra 10 segondra amin'ny hafainganam-pandeha 4.
Nesorinay ny sarony, hitantsika fa nafangaro izy io ary sarony indray amin'ny programa mandritra izany 6 minitra amin'ny 90 ° amin'ny hafainganana 3. Tsy maintsy fehezina ny crème, raha hitanao fa tsy izany dia andramo kely kokoa. Izahay dia manasaraka ny crème amin'ny fitoeran-javatra iray ary manadio ny vera.
Hanao ny mofomamy izahay, manamboatra lasitra manodidina ny 18 sm ny savaivony izay azo esorina amin'ny lasitra, raha ny amiko dia nampiasa bobongolo vita amin'ny silika aho miaraka amina taratasy greaseproof eo am-potony mba hahafahana manaisotra azy tonga lafatra. Manafana ny lafaoro hatramin'ny 180 ° izahay.
Ao anaty vera izahay dia manampy ny fromazy 250 g sy ny siramamy 100 g. Afangaroinay amin'ny alàlan'ny programa izany 20 segondra amin'ny hafainganam-pandeha 1. Ampio ny atody 3 dia kapohina indray 15 segondra amin'ny hafainganam-pandeha 4.
Ampio ny menaka oliva 40 ml, ny lafarinina varimbazaha 225 g sy ny valopy masirasira ary afangaro 15 segondra amin'ny hafainganam-pandeha 4.
Arotsanay ao anaty lasitra ny koba ary alefaso ny atiny. Hetezo ho paoma manify ny paoma ary apetaho eo ambonin'ilay koba ny sosona iray. Manarona ny tampony amin'ny crème pastry izay notehirizinay izahay ary mametraka azy ao anaty lafaoro mandritra ny 40 minitra miaraka amin'ny hafanana ambony sy ambany. Makà sombin-taratasy vita amin'ny aliminioma ary sarony ny tampon'ity mofomamy ity mandritra ny 25 minitra voalohany, avy eo saraho izy ary avelao ho lasa volontany ny sisa tavela amin'ny fotoana.
Raha vantany vao vita dia avelantsika hangatsiaka ilay mofomamy ary azontsika atao ny manarona azy amin'ny siramamy. Ho vonona hanandrana ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Thermorecetas » Resipeo thermomix » Postres » Mofomamy spaonjy Apple miaraka amin'ny crème pastry
José Mª dia hoy izy:
Ary ahoana no fanomanana ny mofomamy?
Valiny tamin'i José Mª
Eo anelanelan'ny dingana 3 sy 5 dia napetraka. MISAOTRA
Mofomamy sôkôla roa, ho an'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana